Bogga ugu weyn 15 Kaararka Deynta Ugu Fiican ee Ardayda Kulliyadda 2022 -ka
Kani waa maqaal ay tahay inaad akhrido haddii aad tahay arday rumaysan in dhammaan kaararka deynta ardaydu ay isku mid yihiin. Khadka amaahda ee kharashka dugsiga iyo wixii la mid ah.
Runtu waxay tahay in arday kasta uu tixgeliyo faa'iidooyinka muddada-dheer ee helitaanka kaarka deynta. Miyay tahay arday, tusaale ahaan, inuu qaato kaarka amaahda (credit card) haddii ay ku dhex mari karaan dugsiga iyaga oo aan wax deyn ah amaahan? Waa maxay qaabka ugu weyn ee kaarka amaahda loogu talagalay ardayda horay u lahayd taariikhda amaahda?
Marka, maqaalkan, waxaan ku eegi doonaa 10 kaararka amaahda ugu fiican ee ardayda sannadka 2022, iyadoo la tixgelinaayo adeegsiyo iyo ujeeddooyin kala duwan.
1. Abaalmarinta Degdegga ah ee Degdegga ah ee Ardayda:
Abaalmarinta Capital One Quicksilver ee kaarka amaahda ee ardaydu waa kaar amaah oo cusub oo hadda nool, waana doorasho aad u fiican haddii aad rabto fududeyn iyo dib -u -soo -celin kaar oo aan lahayn lacag sannadle ah. Kaarka amaahda ee Capital One waxaa khubaradu u tixgeliyaan inuu yahay kaarka amaahda ee ugu wanaagsan ardayda sannadka 2022.
Intaas waxaa dheer, waxaad heli doontaa 1.5 boqolkiiba lacag caddaan ah oo aan xad lahayn oo ah wax kasta oo aad iibsato, oo ah kaashka ugu sarreeya ee kaadhadhka kaararka deynta ee ugu fiican liiska ardayda kuleejka.
Intaa waxaa sii dheer, mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan kaararka deynta ee Capital One, oo ay ku jiraan Abaalmarinta Capital One Quicksilver ee Ardayda, ayaa ah inaad adeegsan karto lambarka kaarka dalwaddii si aad u bixiso dhammaan iibsiyadaada internetka.
Intaa waxaa sii dheer, lakabkan dheeraadka ah ee ilaalintu wuxuu badbaadin doonaa kaarkaaga deynta, gaar ahaan haddii aad qof la wadaagayso aalad.
2. Soo ogow, Arday:
Waxaan ku bilaabi doonaa Discover's Discover it Kaarka amaahda ee ardayga. Kaas oo ah kaarka ujeedka oo dhan ah oo ku habboon ardayda isku dayaya inay cagta cagtooda geliyaan albaabka. Soo ogow ardaygu sidoo kale waa mid ka mid ah kaararka amaahda ee ugu wanaagsan ardayda 2022.
Qaar ka mid ah qiimaynta mareegaha waxay wax weyn ka qabtaan awoodda wareejinta dheelitirka ee kaarkaan. Laakiin inta badan ardayda sannadka koowaad, waa sifo aan muhiim ahayn. Ka sokow la'aanta dhiirrigelinta is-qoritaanka, waxaad filan kartaa APR 15 illaa 25%, taas oo ku xidhan mudnaantaada deynta.
Waa inaad haysataa dhibco buundo oo hufan. Oo daahfurka wuxuu bixiyaa 5% kaydinta qeybahooda saddexda biloodlaha ah sida caadiga ah. Discover waxay ku dari doontaa $ 20 wadarta gunnadaada lacag -celinta ah haddii aad gaarto 3.0 GPA dhammaadka sannadka
3. Bangiga Ameerika Kaarka Lacag -bixinta Abaalmarinta Lacagta Lacageed:
Kaarka Amaahda ee Abaalmarinta Lacagta Lacagta ah ee Bangiga Ameerika wuxuu u oggolaanayaa ardayda kuleejka ee caqliga leh inay kasbadaan lacag badan oo dheeri ah iyagoo kasbaday 3% kaash ah mid ka mid ah qaybaha ay jecel yihiin. Kaarka amaahda ee abaalmarinta lacagta caddaanka ah ee Bangiga Ameerika waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kaararka amaahda ee ugu wanaagsan ardayda, sababtoo ah faa'iidooyin badan.
Gaaska, dukaamaysiga onlaynka ah, cuntada, safarka, farmasiiyada, iyo hagaajinta guriga/alaabta guriga ayaa ka mid ah qaybahan. Intaas waxaa sii dheer, sida ugu fiican oo dhan, iyada oo ku xidhan caadooyinkaaga kharash -garaynta, waxaad beddeli kartaa qaybtaada bil kasta.
Intaa waxaa sii dheer, xitaa kaararka amaahda ee caadiga ah, tani waa faa'ido dhif ah, sidaa darteed awood u yeelashada dib u soo celinta lacagta caddaanka ah ee ku saleysan caadooyinkaaga kharash -gareyntu waa wax aad u weyn. Tusaale ahaan, haddii aad qorsheysay safar waddo bil ah, taasi waxay noqon doontaa waqtiga ugu habboon ee lagu beddeli karo qaybta gunnadaada gaas oo aad kasbato 3% lacag-celin mar kasta.
4. Soo ogow Chrome:
Kaadhkan wuu ka duwan yahay kii hore loo soo sheegay in loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda lacagta badan ku bixisa batroolka iyo cunista dibadda. Ereyga “aad u badan” waxaa loola jeedaa qiyaastii $ 330 bil kasta, taas oo laga yaabo ama laga yaabo inaysan waxtar u lahayn ardayda qaarkood.
Kaarka Ardayga ee Discover wuxuu leeyahay isla APRs iyo gunnooyinka GPA, laakiin faa'iidada ugu weyn ayaa ah in la helo 2% lacag -celin halkii 1% laga bixin lahaa dhammaan kuwa gourmet -ka ah.
5. Mastercard sugan oo laga helay Capital One:
Haddii aan laguu oggolaan karin kaarka amaahda ee ardayga oo loogu talagalay dadka leh sumcad caddaalad ah, kaarka deynta la hubo sida Master One Secured Mastercard ayaa jawaabta noqon karta. Inkasta oo kaarkaan aan loogu talagalin ardayda, ma jiraan wax xaddidaad ah oo ku saabsan qofka codsan kara. Waa mid ka mid ah kaararka amaahda ee ugu wanaagsan ardayda 2022.
Intaa waxaa sii dheer, ka hor intaadan adeegsan kaarka deynta ee la hubo, waa inaad marka hore dhigtaa deebaaji lacag caddaan ah. Mastercardka Sugan ee ka yimid Capital One wuxuu leeyahay $ 49, $ 99, ama $ 200 deebaajiga ugu yar ee la soo celin karo.
XIDHIIDHKA: Waa immisa Qiimaha Nadiifinta Roogga Qolkiiba?
Tani waxay xaqiijineysaa in bangigu haysto lacagahaaga haddii aad dib uga dhacdo lacag bixin kasta. Lacag badan oo aad dhigato deebaajiga amniga, waxaa sii weynaan doona khadkaaga amaahda.
Intaa waxaa dheer, marka laguu oggolaado kaarka. Waxaad dib u soo ceshan kartaa deebaajigaagii hore adiga oo u dhaqmaya si xilkasnimo leh, sida bixinta biilasha waqtigeeda.
Koontadaada ayaa si dhow loola socon doonaa, oo deebaajiga amniga ayaa laguu soo celin doonaa sida deynta caddaynta marka bangigu go'aamiyo in koontadaadu diyaar tahay. Lacagta deebaajigaaga waa la soo celin doonaa haddii aad go'aansato inaad xirto koontadaada.
6. Xoriyadda Chase oo aan Xadidnayn:
Sababtoo ah qaar ka mid ah kaararka kor ku xusan waxay dalbanayaan dhibco buundo oo hufan, maxaad ugu dari weyday kaar aan ahayn kaarka ardayga ee isku jira? Haddii aad u qalanto, Chase Freedom Unlimited waxay kugu abaalmarin doontaa 3% dib -u -celin lacageed dhammaan iibsiyada sannadka ugu horreeya. Chase Freedom Unlimited ayaa sidoo kale ku jirta liiska kaararka amaahda ugu fiican ee ardayda sanadka 2022.
Mid ka mid ah farqiga ayaa ah in kaarka Chase saldhigiisu yahay APR wuxuu ka bilaabmaa boqolkiiba 17. Khasaare kale ayaa ah in dhiirigelintaada dib -u -soo -kabashada hoos loogu dhigo 1.5 boqolkiiba sannadka koowaad kadib. Waad ka faa'iideysan kartaa xaaladdan adoo helaya kaarkaan Chase muddo sannad ah ka dibna u beddesha kaarka Discover intaas ka dib.
7. U Qalmay Master EDU ee Ardayda:
Sababtoo ah Deserve EDU Mastercard ee Ardayda ma aha kaarka deynta ee caadiga ah.waxay leedahay hab oggolaansho oo waxyar ka duwan. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad tahay arday caalami ah, uma baahnid lambarka soshal sekuuritiga si aad u dalbato kaarka. Marka, waad dalban kartaa xitaa haddii aad wax ku baraneyso Mareykanka.
In kasta oo Deserve EDU Mastercard ee Ardayda kaliya ay bixiso 1% kaash ah doolar kasta oo la isticmaalo. Tilmaamaha dheeraadka ah ee kaadhkaan bilaa sanadlaha ah ayaa laga yaabaa in ka badan magdhowga heerka abaalmarinta hoose. Bilowga, kaarkaan waxaa ku jira caymiska taleefanka gacanta, kaas oo kaa badbaadin kara boqolaal - haddii aysan ahayn kumanaan - lacag inta aad ku jirto xirfaddaada waxbarasho.
8. Kaarka Kulliyadda ee Wells Fargo Cash Back:
Dhibaatada APR waa mid muhiim ah maxaa yeelay hubaal waxaad yeelan doontaa deyn arday afar sano oo kulliyad ah. Markay timaaddo kaararka deynta, tirada boqolleyda sanadlaha ah oo yar, ayaa ka sii fiican.
Saldhigga Wells Fargo APR wuxuu ka bilaabmaa boqolkiiba 13 wuxuuna gaaraa 23 boqolkiiba. Si ka duwan kaararka kale ee liiskan ku jira.
2% ayaa laga yaabaa inaysan u muuqan wax badan, laakiin waxay kor u kici doontaa in ka badan afar sano ama ka badan kulliyadda - ha ahaato mid aad ku raalli tahay ama waxyeelladaada.
Xitaa ka sii fiican, uma baahnid dhibco buundo oo hufan si laguu oggolaado kaarka. Si aad u hesho kaarka, waa inaad marka hore furtaa xisaabta bangiga Wells Fargo. Waa kaar xiiso leh oo mudan in la baaro.
9. Kaarka Deynta Fiisaha ee Petal 2:
Markay timaaddo oggolaanshaha codsiyada, WebBank, oo bixisa Kaarka Deynta ee Petal 2 Visa, wuxuu qaataa hab aan caadi ahayn. Halkii aad ku tiirsanaan lahayd oo kaliya dhibcaha dhibcahaaga FICO si loo go'aamiyo haddii ay tahay in laguu oggolaado kaarka, Petal waxay abuurtaa “Dhibco Lacag” oo ku salaysan taariikhda bangigaaga.
Tani waxay tixgelinaysaa dakhligaaga, kharashaadkaaga, iyo keydintaada, sidaa darteed xitaa haddii aad tahay arday aan dakhli lahayn, taariikhda bangigaaga ayaa kaa caawin karta inaad oggolaato.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale ogaan doontaa in abaalmarinta lagu aruurinayo kaarkaan ay waxyar ka duwan tahay wixii aad horay u baran jirtay. Intaa waxaa dheer, Dhowrkii bilood ee ugu horreeyey, waxaad heli doontaa 1% kaash ah dhammaan iibsiyada. Lix bilood ka dib lacag-bixinta waqtigeeda, heerka abaal-marintaadu wuxuu gaarayaa 1.25 boqolkiiba, iyo ka dib 12 bixinta waqtiga-ku-meel-gaadhka ah, waxay u kacdaa 1.5 boqolkiiba.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira ganacsato yar oo aad ka heli karto 2% ilaa 10% lacag celin. Fursadahaas lacag-soo-celinta ee gunnada ah ayaa si joogto ah loo cusbooneysiiyaa waxaana laga yaabaa in laga helo app-ka Petal. Macaamiishu waxay kaloo qaddarin doonaan xaqiiqda ah inaysan jirin khidmadaha sannadlaha ah, khidmadaha dambe, ama khidmadaha macaamilka shisheeye ee kaarkaan.
10. Abaalmarinta Ardayda ee Safarka Capital One:
Kani wuxuu ku yaal dhammaadka ka soo horjeeda heerka APR ee Wells Fargo liiskaan. Iyada oo leh APR go'an oo ah 26.99 boqolkiiba, kaarkaan wuxuu ku gelin karaa arday dhibaato weyn haddii ay ku guuldareystaan ​​inay dheelitirnaan hooseeyaan kaarka. Kaarka abaalmarinta ardayda safarka koowaad ee Capital One sidoo kale waa mid ka mid ah kaararka amaahda ee ugu fiican ardayda.
XIDHIIDHKA: 50 CENT NET WORTH (LA cusboonaysiiyay 2022)
Haddaba, maxaad ugu talin lahayd? Marka hore, waxaa jira faa iido abaalmarin 1% ah, oo lagu kordhin karo 1.25 boqolkiiba goor dambe.
Intaas waxaa sii dheer, kaarka Journey -ku wuxuu wax walba fududeeyaa, markaa maahan inaad ka walwasho la kulanka xannibaadaha kharash -garaynta ama aad ku dhacdo rubuc kalandarka ku habboon si aad u hesho faa'iidooyin badan oo lacag -celin ah.
Intaa waxaa dheer, haddii aad bixiso shanta lacagood ee ugu horreysa waqtigeeda, waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelato kordhinta xaddidaadda deynta, taas oo ah wax aan dhammaan kaararka liiskan ku jira bixin.
11. Abaalmarinta Citi+ Kaarka Ardayga:
Tixgeli kaarkaan Citibank haddii aad ku raaxaysato barnaamijyada abaalmarinta oo aad qorsheyneyso inaad u isticmaasho mustaqbalka fog. Kani waa kaarkii ugu horreeyay ee liiska ku jira ee bixiya gunno is-qoritaan. 15,000 dhibcood oo gunno ah ka dib markii ay kharash gareeyeen $ 1,000 90 -kii maalmood ee ugu horreeyay. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa kaararka amaahda ee ugu wanaagsan ardayda,
12ka wareeg ee lacag bixinta ugu horreysa, waxaa jira 0% dalab xayaysiis APR, ka dib waxaa lagugu soo dalacayaa 15-25 boqolkiiba APR caadi ah. Qodobbadaas 15,000 waxay u socon karaan waddo dheer xagga iibsiyada mustaqbalka ee Amazon iyo Best Buy, tusaale ahaan.
12. Bank of America Abaalmarinta Abaalmarinta Kaarka Deynta ee Ardayda:
Kaarka Amaahda ee Abaalmarinta Socdaalka Bangiga Ameerika ee Ardayda ayaa laga yaabaa inuu kuu noqdo xalka saxda ah haddii aadan rabin inaad ka welwesho qaybaha gunnada oo aad rabto hab toos ah.
Intaa waxaa dheer, wax kasta oo aad ku iibsato kaarkaan, waxaad heli doontaa 1.5 dhibcood doolar kasta oo aad qarashgareyso. Tani way ka weyn tahay 1% lacag -celinta caadiga ah, laakiin waxaad seegi doontaa qaybaha gunnada ee kaararka kale qaarkood, oo laga yaabo inay ku kasbadaan ilaa 5 jeer ka badan.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa iyaduna mudan in la xuso, si ka duwan qaar ka mid ah kaararka kale ee ku jira liiskayaga, Abaalmarinta Socdaalka Bangiga America ee Ardaydu wuxuu ku bixiyaa dhibco halkii lacag caddaan ah. In kasta oo aad had iyo jeer lacag ku shubto dhibcahaaga, waxaad lumin doontaa qaar.
13. Kaarka Fiisaha Ardayga ee Beeraha Gobolka:
Haddii aad tahay arday leh dhibcaha dhibcaha oo liita. Weli waxaa jirta fursad aad ku heli karto kaarka deynta oo ku abaalmarin doona marka lagu daro hagaajinta qiimeyntaada deynta.
APR waxay la mid tahay inta badan kaararka ku jira liiskayaga, oo u dhexeeya 17 ilaa 25%. Haddii aad leedahay caymiska beeraha ee Gobolka, waxaad ku heli kartaa saddex dhibcood doolar kasta oo aad isticmaasho. Kaas oo si habboon ugu habboon lacag -bixintaada billaha ah.
Khasaaraha ayaa ah in dhibcaha aad kasbato laguma beddeli karo lacag caddaan ah, laakiin waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo in lagu bixiyo Caymiska Beeraha ee Gobolka iyo waxyaabo kale. Kaadhkan, haddii si habboon loo isticmaalo, ayaa kaa caawin kara inaad dib u soo ceshato dhibcaha ka hor qalin -jabinta, taasoo ku siinaysa bilow cusub.
14. BankAmericard ee Ardayda:
Kaarkaani wuxuu ka soocan yahay dadka badan maadaama ay u oggolaanayso carruurta aan aqoon u lahayn amaahda inay codsadaan. Intaa waxaa dheer, dhowr sifo oo kale ayaa kaarkan ka dhigaya doorasho wanaagsan. Dhammaan faa'iidooyinkeeda ayaa ka dhiga mid ka mid ah kaararka amaahda ugu fiican ee ardayda
Oo ay ku jiraan isku mid APR (15 boqolkiiba - 25 boqolkiiba) sida kaararka u baahan dhibco wanaagsan, lacag ujro sannadle ah, iyo ciqaab APR ah. Kaliya waa dhisme deyn fudud oo aan lahayn glitz.
15. U -qalma Edu:
Ugu dambayn liiskayaga kaararka amaahda ugu fiican ee ardayda waa kaarka amaahda ee Deserve Edu. Ardayda caalamiga ah ee idinka mid ah lama ilaawin. La'aanta lambarka soshal sekuuritiga iyo taariikh deyn la'aan waa laba carqalad oo ku yimaada noqoshada arday ajnabi ah.
Intaa waxaa sii dheer, kaarka 'Deserve Edu' wuxuu leeyahay heer boqolkiiba 20.99 oo naxdin leh (APR). Kaas oo ka hooseeya waxa ay ardayda Maraykanka qaarkood ka bixiyaan kaararka kale ee liiskan ku jira. Xadka ugu badan ee deynta ee kaarka waa $ 5,000, taas oo ka sarreysa arday badan oo Mareykan ah ay heli karaan.
Waxaad dooni doontaa inaad dalbato kaarka adiga kugu habboon maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo lagu beddeli karo kaarka deynta ee ardayda jaamacadda. Laakiin kor ku taxan waa 15 kaararka amaahda ugu fiican ee ardayda sanadka 2022.
XIDHIIDHKA: 10 Barnaamijyada Lambarka Taleefanka Ganacsiga ee Bilaashka ah 2022 -ka
Waa inaad tixgelisaa meesha aad taagan tahay marka loo eego taariikhda amaahda - haddii aad mid leedahay - iyo waxa adiga kuugu muhiimsan xagga faa'iidooyinka. Intaa waxaa dheer, Haddii aad tahay arday kulliyad sannadka koowaad ah oo aan lahayn taariikh deyn, tixgeli Capital One Secured Mastercard, Petal 2 Visa, ama Deserve EDU Mastercard.
Saddexdaan kaar waxay si weyn u kordhin doonaan fursadahaaga oggolaanshaha, dhammaantoodna waxay kaa caawin doonaan hagaajinta dhibcahaaga deynta iyadoo la wargelinayo hawlahaaga mas'uulka ah - sida bixinta lacagahaaga waqtigooda - dhammaan saddexda xafiis ee deynta.
Maxaa kaarka ardayga kaga duwan yahay kaarka deynta ee kale?
Si ka duwan kaararka deynta ee caadiga ah, kaararka amaahda ardayga waxaa loogu talagalay ardayda kuleejka leh taariikh deyn oo yar ama aan lahayn. Marka si caqli -gal ah loo isticmaalo, kaarka ardayga ayaa kaa caawin kara sameynta amaahda iyo suurtogalnimada inaad hesho faa'iidooyin. Intaa waxaa dheer, celceliska kaarka ardayga waa mid aan la hubin, taasoo la micno ah bixiyaha uma baahna deebaaji si uu u furo koontada. Astaamaha kale ee lagu kala saaro kaararka amaahda ardayga iyo kaararka deynta caadiga ah. Xaddidyada amaahda ayaa la dhimayaa, iyada oo abaalmarino kooban iyo faa'iidooyin gaar ah la siinayo ardayda.
Ardaydu ma heli karaan kaararka deynta oo aan lahayn wax dhibco ah?
Kaararka amaahda ma aha kuwo gaadhi kara ardayda aan lahayn taariikh deyn. Waxaad codsan kartaa, kaararka amaahda ardayga. Waxaa intaa dheer in aad noqotid isticmaale idman kaarka waalidka. Kaararka amaahda ee sir ah. Kaararka amaahda ee dukaamaysiga. Iyo kaararka deynta oo kale ayaa la heli karaa.
Waa maxay faa'iidooyinka lahaanshaha kaarka deynta arday ahaan?
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo ku saabsan qaadashada kaarka. Waxaana ka mid ah: dhisidda deyntaada, ka ilaalinta xatooyada iyo khiyaanada, iyo sidoo kale kasbashada abaalmarinta.
Maxaad ka ogaanaysaa helitaanka kaarka deynta ee ugu horreeya?
Arrinta ugu muhiimsan ee ardayda kuleejku ay tixgeliyaan waa haddii ay diyaar u yihiin inay culayska la tacaalaan. Ardaydu waxay hagaajin karaan dhibcahooda iyagoo adeegsanaya kaararka amaahda, laakiin waa inay dheelitirkooda hoos u dhigaan oo ay biilasha bixiyaan iyo waqtigooda bil kasta. Intaa waxaa dheer, tixgeli ardayga iyo kaararka amaahda ee la hubo, kuwaas oo aan u baahnayn wax yar oo taariikhda sumcadda ah.
Waxaad yareyn kartaa xulashooyinkaaga adoo isbarbar dhigaya APRs, deebaajiga amniga, khidmadaha sanadlaha ah, iyo barnaamijyada abaalmarinta. Intaas waxaa sii dheer, Raadi kaararka deynta ee bixiya u qalmitaanka oo ha dalban wax aad u badan hal mar. Codsiyadaadu waxay keeni doonaan weydiimo adag, kuwaas oo si xun u saamayn kara sumcaddaada.
Waa maxay qiimaha helitaanka kaarka deynta?
Haddii aad raadinayso kaarka amaahda ardayga, waxaad u baahan doontaa inaad ka warqabto khidmadahan iyo shuruudaha si aad u doorato ikhtiyaarka ugu habboon. Qaar ka mid ah khidmadahaani waa sida dulsaarka kaarka deynta u shaqeeyo, APRs iyo intee in le'eg ayay bixin doontaa dheelitirka kaarka deynta?
Kaarka Amaahda ee Abaalmarinta Ugu Fiican UK
9 Kaararka Amaahda ee APR ee hooseeya
Waa maxay Kaarka Deynta? Sida ay u Shaqeyso iyo Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Xaaladda Codsiga Kaarka Deynta
Bangiyada ugu Fiican Tennessee Sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Kaalmaha Shidaalka ma qaataan Apple Pay? Liis Dhamaystiran
Horumarka tignoolajiyada, dunidu waa isbedelaysaa sidoo kale siyaabaha aan wax uga bixinno kaalmaha shidaalka;…
Ma doonaysaa inaad xirfadaha suuqgeynta dhijitaalka ah u qaado heerka xiga? Dunida casriga ah ee maanta aadka u sareysa…
Xiddigaha Ugu Fiican Hyderabad | 2022 Liiska Buuxa
Waligaa ku fikirtay inaad ogaato waxa noloshaada ku dhici doona saacadaha soo socda ama…
Waa maxay Furaha Amniga Shabakadu?
Horumarka internetka iyo teknoolajiyada ayaa ahaa mid degdeg ah. Natiijo ahaan, isticmaalayaasha khadka tooska ah ayaa helitaan dheeri ah…
Kaamirooyinka Amniga Guriga ee ugu Wanaagsan ee La Ilaaliyo ee 2022
Nidaamyada amniga ee is-ilaalinta ayaa si isa soo taraysa caan u noqday iyadoo mulkiilayaasha guryuhu ay dalbadaan in si buuxda loo xakameeyo amniga gurigooda iyada oo aan la gelin…
Sida Loo Iibsado Kaydka SpaceX 2022
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo iibsado saamiyada SpaceX? Maqaalkani waxa uu ka kooban yahay hage dhammaystiran oo ku saabsan wax kasta…